Wuxuu ku guuleystey Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Wuu sameyn karaa!
Gudaha waxaan dareemeynaa rajo iyo nabad iyo farxad, laakiin waxaan wali ku jirnaa waqti aan la hubin oo waali ah. Waxaan nahay dad xog-ogaal ah oo aan ka cabanayno tirada macluumaad badan. Adduunkeenu wuu sii adkaanayaa oo wareerinayaa. Yaa weli yaqaan waxa ama cidda aad rumeysan karto? Siyaasiyiin badan oo adduunka ah ayaa dareensan in xaaladaha degdegga ah ee isbedelaya xaaladaha siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale ay yihiin kuwa laga adkaado. Waxaan sidoo kale dareemaynaa inaanan kaqeyb qaadan karin isbeddelada ku yimid bulshadaan aadka u adag. Waqtigan la joogo ma dareemayo xasillooni amaan. Dad aad u yar iyo dad tiro yar ayaa aamminsan garsoorka. Argagixisanimo, dambiile, damac siyaasadeed iyo musuqmaasuq ayaa khatar ku ah amniga qof walba.
Waxaan inbadan u baran jirnay xayeysiinta joogtada ah 30-kii sekan ilbiriqsi oo waxaan noqonnaa kuwa samir badan marka qof nala hadlo wax ka badan laba daqiiqo. Haddii aanaan jeclayn wax dambe, waxaan beddelnaa shaqadeena, abaarmannada, hiwaayadda ama xaaskaaga. Way adagtahay in la joojiyo oo lagu raaxeysto daqiiqada. Waxaan si dhakhso leh u caajisaan maxaa yeelay shaqsi ahaanteena ayaa kujirta xasillooni darro. Waxaan caabudnaa sanamyada waxyaalaha loo yaqaan 'materialism' 'waxaanan nafteena u dhiibnaa "ilaahyo" oo naga dhigaya wanaag inaan ku qancinno baahiyahayaga iyo hamigeenna. Adduunyada jahwareerka ka buuxa, Ilaah wuxuu isku muujiyey calaamooyin iyo mucjisooyin badan laakiinse kuwa badan oo aan rumeynin isaga. Martin Luther wuxuu mar yiri in abuurku ka kooban yahay saddex mucjisadood: «Midda koowaad waa in Ilaah nin noqday. kii labaadna in bikro hooyadeed noqotay hooyo iyo saddexaad oo ah in dadku si daacadnimo ah u rumaystaan ​​».
Dhakhtarkii Luukos baa baaray oo qorey wuxuu ka maqlay Maryan: “Malaa'igtiina waxay ku tidhi: Ha baqin, Maryaho, waxaad heshay nimco xagga Ilaah ah. Bal eeg, waad uuraysan doontaa oo waxaad dhali doontaa wiil, oo magiciisana waxaad u bixin doontaa Ciise. Nin weyn buu ahaan doonaa, waxaana loogu yeedhi doonaa Wiilka Kan ugu sarreeya, oo Rabbiga Ilaaha ahu wuxuu isaga siin doonaa carshigii awowgiis Daa'uud, oo wuxuu boqor u ahaan doonaa reer Yacquub weligiis, oo boqortooyadiisiina weligeed ma dhammaan doonto. Kolkaasaa Maryan waxay malaa'igtii ku tidhi, Sidee baa waxanu ku noqon doonaan, iyadoo aanan ninna aqoon? Malaa'igtii baa u jawaabtay oo ku tidhi, Ruuxa Quduuska ah ayaa kugu soo degi doona, oo xoogagga Kan ugu sarreeya ayaa hoosiis kuu noqon doona. Sidaa darteed kan Quduuska ah oo dhalan doona waxaa loogu yeedhi doonaa Wiilka Ilaah, (Luukos 1,30-35). Nebi Ishacyaah ayaa tan saadaaliyay (Ishacyaah 7,14). Kaliya Ciise Masiix ayaa wax sii sheegiddu rumoobi kartaa.
Rasuul Bawlos wuxuu qoray imaatinka Ciise ee kaniisadda Korintos: "Waayo, kii Ilaah yidhi: Iftiin ha ka ifo gudcur, wuxuu qalbiyadeenna iftiin wanaagsan ka siiyey iftiinka aqoonta ammaanta Ilaah oo inagu dhex kici doonta. Wajiga Ciise Masiix (2 Korintos 4,6). Haddaba aan bal hadda ka fikirno wixii nebi Ishacyaah ku yidhi Axdigii Hore oo ku saabsan astaamaha Masiixa, oo ah “kii subkanaa” (Masiixa Griiga) ayaa noo qoray:
"Ilmo baa innaga dhashay, wiil baa naloo siiyay, oo dawladuna garbihiisaa ku dul fadhida; oo magiciisuna waa La-Taliyaha Miracle, Eebbe weyne, Aabaha daa'imka ah, Amiirka Nabadda; si boqornimadiisu u weynaan lahayd oo nabadu weligeed uga dhammaan weydo carshiga Daa'uud iyo boqortooyadiisa, inuu xoojiyo oo uu ku xoojiyo sharciga iyo caddaaladda tan iyo weligeedba. Oo qiirada Rabbiga ayaa taas samayn doonta (Ishacyaah 9,5: 6).
Isaga laf ahaantiisu waa "La-Taliyaha La Yaabka leh". Wuxuu ina siiyaa raaxo iyo xoog markasta iyo weligiis. Masiixa laftiisu waa "mucjiso". Ereygu wuxuu tilmaamayaa wixii Eebbe sameeyey, mana aha waxa dadku sameeyay. Isagu waa Ilaah qudhiisa. Ilmahan noo dhashay waa mucjiso. Wuxuu ku xukumaa xigmad aan macquul ahayn. Uma baahna la-taliye ama gole wasiir; Isagu waa la taliye laftiisa. Ma waxaan ugu baahannahay xigmad saacadan baahi u baahan? Waa tan la taliyihii u qalma magacan. Isagu ma daalayo. Had iyo jeer waa kujiraa. Waa xigmad aan xad lahayn. Wuxuu mudan yahay daacadnimo maxaa yeelay taladiisu waxay dhaaftaa xadadka aadanaha. Ciise wuxuu casuumay qof kasta oo u baahan la-taliye cajiib ah inay isaga u yimaadaan. Ii kaalaya kulligiin kuwiinna hawshaysan oo culaabaysanow. Waxaan rabaa inaan ku qanco. Harqoodkayga dushooda ku qaata oo wax iga barta; maxaa yeelay, waan qalbi qaboobaa oo qalbi libaax; oo naftiinna nasashaad u heli doontaan. Maxaa yeelay, harqoodkaygu waa mid jilicsan, oo rarkayguna waa fudud yahay » (Matayos 11,28: 30).
iyo Ilaaha Xoogga leh
Isagu waa Ilaaha Qaadirka ah. Isaga laftiisu waa "geesiga ilaaha". Masiixu waa awoodda buuxda, nool, Ilaaha runta ah, oo meel walba jooga oo wax walba og. Ciise wuxuu yidhi: "Aniga iyo Aabbuhu mid baannu nahay" (Yooxanaa 10,30). Masiixa qudhiisa waa Ilaah awood u leh inuu badbaadiyo qof kasta oo isaga isku halleeya. Isaga ma haysto wax ka yar awoodda Eebbe oo dhan. Isaguna wuu samayn karaa wuxuu diyaariyey inuu sameeyo.
Isagu waa aabbe weligiis. Isagu waa mid jecel, daryeel badan, kalgacal leh, daacad ah, caqli badan, hoggaamiye, bixiye iyo ilaalin. Sabuurradii 103,13 waxaan ku akhrinaa: "Sida aabuhu naxariis ugu sameeyo carruurta, ayuu Rabbigu u naxaa kuwa isaga ka cabsada".
Kuwa u halgamaya muuqaalka aabaha wanaagsan - halkan waa kan u qalma magacan. Waxaan ku haysan karnaa nabadgelyo buuxda xiriir dhow oo jacayl ah oo aan la leenahay Aabeheenna Daa'imka ah. Rasuul Bawlos wuxuu si gaar ah noogu dardaarmay Waraaqda ku socota Roomaannada ereyadan: "Waayo, ma aydnaan helin ruuxa addoonsiga oo cusub inaad ka cabsato, laakiin waxaad hesheen Ruuxa carruurta oo aan ugu yeedhno:" Aabbow, aabbe! " Haah, oo Ruuxa qudhiisu iyo Ruuxayagu way markhaati furayaan inaynu innagu nahay carruurta Ilaah. Laakiin markaynu carruurta nahay, innaguna waxaynu nahay kuwa dhaxla, kuwo wax dhaxla, kuwo Ilaah dhaxla oo Masiix wax la dhaxla. Si kastaba ha noqotee, tan macnaheedu waa inaan hadda la silcinno isaga; ka dibna annaguna qaybteenna waan kula wadaagi doonnaa (Rooma 8,15-17 Tarjumaadda New Geneva).
Isagu dadkiisuu nabadgelyo ku xukumaa. Nabadiisu waara weligeedba. Isagu waa udub dhexaadka nabada, waana sababtaas tan uu isagu ugu xukumo dadkiisa la soo furtay inuu noqdo amiir abuuraya nabad. Khudbaddiisii ​​macaanayd ee uu qabtay ka hor intaan la qaban, Ciise wuxuu xertiisii ​​ku yidhi: "Nabad baan idin siin doonaa" (Yooxanaa 14,27). Rumaysadku, Ciise wuxuu ku yimaadaa qalbiyadeenna wuxuuna na siiyaa nabad buuxda. Waqtiga aan isku halleyno gebi ahaanba, wuxuu na siinayaa nabad aan qeexneyn.
Ma waxaan raadineynaa cid ka saarta amni darradeenna oo na siisa xigmad? Miyaad lumisay mucjisada Masiixa? Ma dareemaynaa inaan ku nool nahay waqti faqri ruuxi ah? Isagu waa waano mucjiso ah. Aynu galno eraygiisa oo aan dhegaysanno mucjisooyinka taladiisa.
Markii aan rumeysan nahay Ciise Masiix, waxaan ku kalsoonahay Ilaaha Qaadirka ah. Ma waxaan dareemaynay kaalmad la'aan adduun aan xasilloonayn oo qalalaase ka jiro? Ma waxaan qabnaa rar culus oo aanan kaligiis qaadi karin? Insha allaahu waa xooggeenna. Ma jiraan wax uusan isagu sameyn karin. Isagu wuu badbaadin doonaa qof kasta oo isaga isku halleeya.
Haddii aan rumeysan nahay Ciise Masiix, waxaan leennahay aabbe daa'im ah. Ma waxaan dareensan nahay agoon? Ma waxaan dareemaynaa inaan is difaaci karin? Waxaan heysanaa qof had iyo jeer jecel, oo ina daryeela oo u shaqeynaya waxa ugu fiican annaga. Aabaheena waligiis naga tagi maayo ama naga maqnaan doono. Aynu ku haysanno aaminnimo weligeed ah.
Haddii aan ku aaminno Ciise Masiix, waa amiirkeenna nabada sida boqorkeenna. Miyaynu baqaynaa oo ma awoodno inaan nasanno? Miyaan u baahan nahay adhijir waqtiyada adag? Waxaa jira mid keliya oo ina siin kara nabad-gelyo qoto dheer oo waarta.
Mahad waxaa leh taloheena mucjisada ah, amiirka nabada, aabaha daa'imka ah iyo geesi ilaaha!